ဆုံခဲ့ရတဲ့တနေ့ – My Blog
မီးရဲ့နာမညျ က နှငျးရတီ။ အသကျကတော့ 23 နှဈ။ မနျနဂြောလကျထောကျ။ မီးက နယျကပါ။ ရကွေညျရာမွကျနုဆိုသလို အလုပျကိုငျ ပေါမြားရာ ရနျကုနျရှမွေို့တျောကွီးဆီသို့ တကျလှမျးရာ ကိုကွီးနဲ့ ဆုံရတာ။ ကိုကွီးက မီးရဲ့အထကျလူကွီး မနျနဂြော။ ကိုကွီးလို့သာ ချေါတာပါ။ ခုဆို ကိုကွီးအသကျက 40 ပွညျ့ပွီ။ ခဈြလှနျးလို့ ကိုကွီးလို့ချေါတာ။ ကိုကွီး နာမညျက စိုးမိုးအောငျ လူအေးလို့ပွောရငျ မမှားဘူး။ အကွီးအကဲတနေဲ့ဆုံရငျ သောကျဖွဈတာကလှဲလို့ အားလုံးရှငျးတယျ။ မီးရဲ့ ပထမဦးဆုံးဆိုတာထကျပိုတဲ့ ကိုကွီး မီးရဲ့ အရာရာ ပထမဦးဆုံးသော ကိုကွီး။ အဲ့နကေ အငျတာဗြူးတဲ့နေ ကိုကွီးနဲ့စဆုံရတဲ့နေ့ ကိုကွီးကို မကွညျ့ရဲဘူး။
လကျရှိမှာကိုယျ့ကို စီစဈကွီးကွပျ မေးခှနျးတနေဲ့ သကျမဲ့သူကွီးလေ။ ခေါငျးကိုသာ ငုံ့ထားရငျး မေးတဲ့မေးခှနျးတကေို တုနျတုနျယငျယငျနဲ့ ဖွနေရေတဲ့ မီးကို မွငျမွငျခငျြး ခဈြမိသှားတဲ့ ကိုကွီးလေ ဒီလိုနဲ့ မီးလဲ ကိုကွီးရဲ့ လကျထောကျ အဆငျ့သို့ ရောကျရှိနပွေီ။ ကိုကွီးဆီက ရိသဲ့သဲ့တို့ မထိတထိတို့ စကားတအေပွုအမူတကေို ယောငျလို့တောငျ မရခဲ့ဘူး။ အနတေညျတယျ ပွောရငျပွတျတယျ လုပျရငျ ရှငျးတယျ။ အခုရှုပျမှ နောငျရှငျး တခါတညျးလုပျတယျ။ ဒါမဲ့ လကျအောကျ ငယျသားတကေို ကွညျ့တယျ။ မနိူငျဝနျမထမျးခိုငျးဘူး။ ကိုယျ့မှာသာ ရလောမွောငျးပေးရတာ အမော ကိုယျတျောခြောက ခပျတညျတညျ။
ဆုံခဲ့ရတဲ့တနေ့ သူ့ရဲ့မှေးနမှော သူဌေးက ကိုကွီးကို ဘောကျဆူးအမြားကွီး လကျဆောငျပေးတယျ။ အာ့ကွောငျ့ ကိုကွီးက ကတေီဗှီ လိုကျပို့ပေးတယျ။ လကျအောကျငယျသားတနေဲ့ ကိုကွီးဟာ အဲ့ညမှ သူငယျခငျြး ဘျောဒါတလေို တသှေးတညျး တသားတညျးနဲ့ အရမျးပြျောစရာ ကောငျးတဲ့ညပေါ့။ ကိုကွီးအတှကျ တကျနိူငျသလော လကျဆောငျပေးမယျပေါ့။ ကိုယျတစေီစဉျခဲ့ပမေဲ့ ကိုကွီး မယူခဲ့ဘူး။ လုံးဝလကျမခံဘူး သူပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ အားလုံးကို ဒကာခံကာ ပြျောခဲ့တာည ဖွဈသလို မီးနဲ့ကိုကွီးရဲ့ အခဈြည ရငျခုနျသံဆိုရငျလဲ မမှားပါဘူး။ အပြိုရညျ ပကျြခဲ့တဲ့ည၊ ငိုခဲ့ရတဲ့ည၊ ပြျောခဲ့ရတဲ့ည။
အဲ့ညက ကိုကွီး မီးကို………… အမွညျးကြှေးသညျ။ ခေါငျးတခုလုံးခြာခြာလညျ မူးနောကျပွီး မကျြစိ၂လုံးဖှငျ့လိုကျရငျပဲ ပတျဝနျးကငျြတခုလုံး အရာရာဟာ အစိမျးသကျသကျ စိမျးဖနျ့ဖနျ့ ဆေးသားနဲ့ မကျြနှာကကျြ အေးစိမျ့စိမျ့ ရှိလှတဲ့ Aircon Room ? ဒါဆိုရငျ ငါဘယျရောကျနတောလဲ အိစကျညကျညောလှတဲ့ မှယေ့ာကွီးနဲ့ ခွုံထားတဲ့ စောငျဖွူဖွူအကွီးကွီး ဇဝဇေဝါနဲ့စဉျးစားနရေငျးမှာပဲ မကျြလုံးအစုံပွူးကယျြစှာဖွငျ့ စောငျလေးဟ၍ ပွနျစဈဆေးကွညျ့တော့ သှားပွီ။ ထိနျးသိမျးလာခဲ့တဲ့ သကျတမျးတလြှောကျ အပြိုစငျဘဝကို ဆုံးရှူံးလိုကျရပွီ။ တဆကျတညျး ဘေးကိုကွညျ့တော့ ကိုကွီး မနိုးသေး အိပျနတေုနျး။ ဘယျလိုမေးရမလဲ ငါဘာဆကျလုပျရမလဲ။
ထမယျအလုပျမှာ ပေါငျကွားမှ စပျဖငျြးဖငျြးဝဒေနာ စိုးရိမျစိတျက ငယျထိပျရောကျနပွေီ။ အပျေါပိုငျး အဝတျစားရှိပမေဲ့ အောကျပိုငျးမှာ ဘာမှမရှိတော့ ကိုကွီး ညက မီးကို ကောငျးကောငျး လိုးထားတာပေါ့။ နှမြောမိသလို ဝမျးနညျးဝမျးသာ ဖွဈနရေတယျ။ ဝမျးနညျးတာက အပွညျ့အဝ မခံစားခဲ့ရတာ ဝမျးသာတာက ကိုကွီးကို မီးရဲ့ အပြိုစငျဘဝလေးကိုပေးခဲ့ရလို့။ နှမြောတာကတော့ တသကျလုံးထိမျးသိနျးခဲ့တဲ့ အပြိုစငျဘဝလေး ဆုံးရှူံးခဲ့ရလို့။ ဒါမဲ့ လောလောဆယျမှာ တိုငျပတျနတောက အတှငျးခံဘောငျးဘီနဲ့ စကတျ ရှာမရ။ ဘျောလီက ခြိတျတပွေုတျနေ။ ဒါက ကိစ်စမရှိ ပေါငျကွားကလဲ တောငျ့တငျးတငျးနဲ့မို့ ရခြေိုးခငျြနပွေီ။ တျောသေးသညျ ကိုကွီး မနိုးသေး။
မထူးတော့ပွီမို့ မကျြစိကစားကွညျ့တော့ ရခြေိုးဟုထငျရသညျ့ အခနျးကိုတှေ့၍ စောငျခွုံထဲမှ ထပွီး တနျးပွေးလာခဲ့တော့တယျ။ အခနျးတံခါးဖှငျ့ပီး အခနျးထဲဝငျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျရနျ အပျေါမှာရှိသညျ့ အဝတျမြားအားခြှတျ ရပေနျးဖှငျ့ပွီး တစိမျ့စိမျ့ ခြိုးပဈနတေယျ။ သိမျ့ကနဲ လုပျသှားတဲ့ အရှိနျကွောငျ့ စိုးမိုး ကိုလှုပျနိုးသလို ဆကျခနဲ လနျ့နိုးသှားတယျ။ ဘေးကိုကွညျ့တော့ မီးမီးမရှိတော့ ရသေံလေး သဲ့သဲ့ကွားနရေတော့ ရခြေိုးနပွေီဆိုတာ သိပွီ။ စိုးမိုးညက အဖွဈကိုပွနျစဉျးစားရငျး ကနြေပျစှာ ပွုံးမိနတေော့တယျ။ ညအခြိနျအားဖွငျ့ 1နာရီ ကြျောနပွေီမို့ သူ့ရဲ့ Alphard ကားကွီးဖွငျ့ တယောကျစီဝငျပို့ရငျး နောကျဆုံး မီးမီး ကို ပို့ဖို့ ကနျြတော့တယျ။
မီးမီးကို သူကွိတျကွိုကျနတော။ ဒါပမေဲ့ သူ့စိတျကို ထိနျးခဲ့သညျ။ ကိုယျလဲ အောကျခွကေ တကျခဲ့သညျမို့ ကိုယျ့ရဲ့ လကျအောကျငယျသားတကေို နိူငျထကျစီးနငျး မလုပျစခေငျြလို။ ဒါကွောငျ့ ဆန်ဒကို သိက်ခာဖွငျ့ ထိနျးခဲ့ရသညျ။ မီးမီး အဆောငျနဲ့မလှမျးမကမျးလေးမှာ ရပျပွီး တံခါးဖှငျ့ မီးမီးကို နိုးကွညျ့တော့ မီးမီး တျောတျာ မြားနပွေီ။ မနိူငျတော့ အထိတှမှေ့ာလဲ သာယာနမေိသိ။ ကနြျော လကျကလေးကိုပွီး လုပျနိုးနပေမေဲ့ မီးမီးမနိုးတော့ ဘာတပွေောမှနျးလဲ မသိ။ ဒီပုံစံနဲ့ဆို မီးမီးကိုထားခဲ့လို့မဖွဈတော့ သူ့အခနျးသို့သာ ချေါခဲ့တော့တယျ။ စိုးမိုး နသေညျ့ တိုကျခနျးကိုရောကျတော့ အခြိနျကား 2နာရီကြျောခဲ့ပွီ။
ကားကိုပါကငျထိုးပွီး မီးမီး ကို ကူ၍တှဲခြ မီးမီး လကျတဖကျကို သူ့ပခုံးပျေါတငျ ဟိုဘကျလကျဂြိုငျးအောကျကနသေိုငျးပွီး 3လှာသို့ တကျလာခဲ့ပွီး စိုးမိုးအခနျးရှရေ့ောကျတော့ မီးမီးထိနျးမရတော့ ဘယျဘကျလကျက ဘောငျးဘီအိတျနှိုကျတော့ သော့က ဘောငျးဘီညာဘကျ အိတျကပျထဲမှသော့က ညာဘကျမှာက မီးမီး ရှိနတေော့ မီးမီးကို နရောပွောငျးပွီး သော့နိူကျရနျအတှကျ စိုးမို့ ဘယျဘကျသို့ မီးမီးကို ပွောငျး ညာဘကျလကျက ညာဘကျအိတျထဲနှိုကျနခြေိနျ မီးမီးက အငွိမျမနေ မကျြနှာရှတေ့ညျ့တညျ့မှာမော့ကွညျ့ပွီး ……… ။
ကိုကွီး မီးကို ဘယျချေါသှားမလို့လဲ ””” လို့ တလုံးတညျးပွောပွီး မကျြလုံးပွနျမှိတျကာ ကတြေျာ့ကို ဖကျထားလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့ ရငျထဲ ကုလားဘုရားပှဲလှညျ့သှားတယျ။ ခကျတာက အောကျက ညီတျောမောငျ မစားရတာ တျောတျောကွာပွီမို့ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီ ၂ထပျခံထားတာတောငျ အောကျက ကုနျးထလာတယျ။ မီးမီးရဲ့ ရငျသားအိအိလေးတကေ ကနြေျာ့ကို ကြီစားနသေလိုလို ကနြေျာ့လီးက မာသထကျမာလာနပွေီ။ မီးမီးရဲ့ ဆီးခုံကို ထောကျနပွေီ။ မီးမီးကလဲ ငွိမျငွိမျမနေ ဟိုလှုပျ ဒီလှုပျဆိုတော့ ဆှပေးနသေလို မွနျမွနျ သော့ကိုဖှငျ့ပွီး အိပျယာထကျ မီးမီးကို တငျလိုကျပွီး စောငျသခြောခွုံပေးပွီး အအေးကို နညျးနညျး လြော့လိုကျတယျ။
စိုးမိုး မကျြနှာသဈ တကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးပွီး ဘောငျးဘီ ဒူးကလြေးနဲ့ စပို့ရှပျလကျတိုလေးဝတျပွီး စောငျတထညျ ယူ ဧညျ့ခနျးဆိုဖာပျေါနရောယူပွီး မီးမှိတျအိပျမယျအလုပျ မီးမီးးထံမှ ညညျးသံကွားရပွီး ကနြျောလနျ့နို့လာတယျ ……… ရဆောတယျ ရဆောတယျ ””” အျောနတေော့ ကနြျော မနသောတော့ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှ ရတေဗူးထုတျပွီး မီးမီးကိုထူမ၍ ရတေိုကျလိုကျတယျ မကျြလုံးလေးဖှငျ့ကွညျ့တယျ။ ………ကြေးဇူးတငျပါတယျ ကိုကွီး ””” တဲ့ အရမျးခဈြစရာကောငျးတဲ့မီးမီး စိတျတေ ထိနျးထားခဲ့ရတာမနညျး အောကျက ညီတျောမောငျက တှငျးနံ့ရတာနဲ့ ဝငျအောငျးခငျြနတော ခေါငျးထောငျထလာတယျ။ ……… ကိုကွီး မီးနားမှာနနေျော မီး မူးတယျ ””’ ပွောပီး ကနြေျာ့ လညျပငျးကို သိုငျးဖကျပွီး ကဈြနအေောငျဖကျထားတယျ။
အငျးပါ မီးမီးရယျ ကိုယျ အနားမှာရှိပါတယျ ””” ပွောပွီး ရဘေူးကို ခုံပျေါလှမျးတငျပွီး ဒီဘကျအလှညျ့ အောကျက ဘော့ပငျကို နငျးပွီး ခွခြေျောအိပျယာပျေါသို့ ၂ယောကျသားဖကျယကျ လှဲကွတော့မှ ဇာတျလမျးက လှတာ။ မီးမီး မကျြလုံးလေးဖှငျ့ပွီး တိုးတိုးလေးပွောတယျ။ …… ကိုကွီး မီးကိုကွီးကို ခဈြတယျ ””” တဲ့ ပွောရုံပဲမဟုတျ နူတျခမျးကိုပါနမျးတော့ စိုးမိုးဆိုတဲ့ ကနြျော ဘာသားနဲ့ထုထားတာ ဟုတျလို့တုနျး မီးရဲ့ နူတျခမျးကို ဖကျနမျးနတော အကွာကွီး ငတျနတောလဲ ကွာပွီဆိုတော့ လီးက တျောတျောကို တငျးနပွေီ။ နမျးရငျး လကျတကေ နို့တကေို ကိုငျညှဈနရောကနေ ကြောအောကျ လကျလြိုပွီး ဘောလီခြိတျတကေို ဖွုတျ၊
စကတျလေးကို ဆှဲခြှတျ၊ ပနျးရောငျ အတှငျးခံလေးက ဆှဲဆောငျခငျြစရာကောငျးပွီး ခဈြခွငျးရဲ့ သင်ျကတေ လေးဖဈတဲ့ မီးမီး ရဲ့စောကျပကျနရောလေးက အရညျကွညျလေးတနေဲ့ စိုနတောကွောငျ့ အရညျကှကျထနပွေီ။ လကျဝါးအပွားလိုကျ အုပျလိုကျပွီး အပျေါကို ပှတျဆှဲ တကျသှားလိုကျရာ အဖုတျအမွှောငျး အတိုငျး လကျခလယျလေးက အဖုတျအမွှောငျးကို ပှတျဆှဲတကျသှားပွီး အပျေါတကျအောကျဆငျး အလုပျပေးနလေိုကျတယျ။ အကငြ်္ီကိုလှနျတငျပီး ရဲနတေဲ့နို့သီးခေါငျးလေးတကေို အားရပါးရနယျ စို့ပွီးတော့ ဆီးခုံလေးကို တကျတကျမကျမကျ နမျးရငျး လီးက မနနေိူငျတော့ အတှငျးခံလေးကိုပါ ဆှဲခြှတျပွီး မီးမီးရဲ့ စောကျဖုတျလေးကို ကနြျော နမျးပဈမိတယျ။
လူတေ နံတယျပွောတဲ့စောကျပကျအနံ့ကကို လီးတောငျစတော လြှာနဲ့တခကျြဆှဲယကျပွီး ကနြျော မီးမီး ခွေ၂ခြောငျးကို နရောခပြွီး အလညျမှာ နရောယူလိုကျတယျ။ ကနြျောလဲ ဘောငျးဘီခြှတျပွီး ကနြေျာ့ရဲ့ အရှညျ 7လကျမ လုံးပတျ6လကျမရှိတဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့ လီးကိုကိုငျပွီး မီးမီးရဲ့ စောကျပကျ ဝကိုတညျ့ပွီး ထိုးခလြိုကျတော့တယျ။ ……… အား အားနာတယျ နာတယျ အား …”” စူးစူးဝါးဝါး အျောသံကွောငျ့ ခဏရပျလိုကျပွီး အောကျငုံ့ကွညျ့တော့ သှေးစလေးမြားနဲ့ ဆီးကွိုနတေယျ။ မီးမီး က လုံးဝပါကငျပေါ့ ကနြေပျပွီလေ။ စိုးမိုး ကနြေပျစှာပွုံးလိုကျပွီး မီးမီးရဲ့ နဖူးလေးကျု နမျးရငျး ………ဟငျး ဟငျး နာတယျ ကိုကွီး နာတယျ မလုပျပါနဲ့တော့နျော …”’ ……… အငျးပါ မီးရဲ့ ကိုဖွညျးဖွညျးပဲ လုပျပေးမယျနျော…”’ ခေါငျးလေးကိုလဲပှတျ စကားလေးနဲ့လဲခြော့ လီးကလဲ
ဒဈပဲဝငျသေး ဖွညျးဖွညျးခငျြးညှောငျ့ရငျး ဘေးဘီလှညျ့ကွညျ့တော့ ဂယျြ တှလေို့ လှမျးယူပွီး လီးကိုဆှဲထုတျ ဂယျြ ကို လီးမြာမြားမြားလိမျးကာ မီးရဲ့စောကျဖုတျဝလေးမှာ တညျ၍ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ဖိခလြိုကျတော့တယျ။ ……… အ အ အ နာတယျ နာတယျ ကိုကွီးရေ သပေါပွီရှငျ နာတယျ နာတယျ ကိုကွီး အဟငျ့ ဟငျ့ နာတယျ အ အားးးးး…”” စိုးမိုး ဖွဈခငျြရာဖွဈတော့ ဒဈဝငျနပွေီဆိုတော့ 2လကျမ နီးနီးလောကျ ဝငျနပွေီ။ 5လကျမလောကျ အပွငျမှာ ကနျြနသေေးတော့ အားမရခငျြ အထဲမှာလဲ အမွှေးက ခံနတေယျ။
မီး မီး ခါးကို ကိုငျပွီး ဂယျြ နဲ့မီးရဲ့စောကျရညျ ခြှဲလေးတကေို အားကိုးပွီး အားပါပါနဲ့ တခကျြပဲ စောငျ့ လိုးခလြိုကျတယျ။ ……… အား အားးးးးနာတယျ ကိုကွီး ဟီး ဟီး …”” ပါးစပျလေးကို လှမျးပိတျပွီး နားနားကို ကပျပွောလိုကျတယျ။ ……… တဖွညျးဖွညျးကောငျးလာလိမျ့မယျ မီးရယျ ခဏလေးသညျးခံနျော သိလား ကလေး ကလေးက လိမ်မာပါတယျ …”” မကျြရညျလေးတေ မကျြဝနျးထောငျ့မှာ လှိမျ့ကလြာပွီး ……… ဟုတျ ကိုကွီး ””” လို့ တလုံးတညျးပွောပွီး ဖိုထိုးနတေဲ့ ရငျအစုံကို ကနြျော ညှဈကစားပေးပွီး နူတျခမျးတကေို နမျးစုပျပွီး အောကျက အရငျးထိဝငျနတေဲ့လီးကို တလကျမစာလောကျ အထုတျအသှငျးလေးနဲ့ ညှောငျ့ပေးနတေယျ။ လညျပငျးတကေိုနမျး၊ လြှာနဲ့ယကျပေး၊
နို့လဲ အညှဈခံရ အောကျကလဲ ညှောငျ့ပေးနတေော့ မီးဆီကနေ လိုခငျြတကျမကျတဲ့ အသံလေးတေ ထှကျလာနပွေီ။ ……… အငျး ဟငျးဟငျးးးးးးး အား အ အားးးးးး ကောငျးလိုကျတာ အား…”” လကျတကေ စိုးမိုးလညျဂုတျကို သိုငျးဖကျထားလိုကျတယျ။ အခကျြပွလိုကျသလို အသံလေးတကွေားရတော့ စိုးမိုးလီးကို ပိုထုတျပွီး ပွနျဆောငျ့ပေးနတေယျ။ …ဖလောကျ ……ဖလောကျ ….. ..ဖလောကျ … ဂှေးဥနဲ့ ဖငျ၂လုံကွား ရိုကျသံလေးတတေောငျ ထှကျလာပွီ။ ……… အားးအားးအားးး ကောငျးတယျ ကိုကွီး ကောငျးနပွေီ မီးအရမျးကောငျးနပွေီ …”” စိုးမိုးသိပွီ။ လီးကို ဒဈနားထိ ဆှဲထုတျပွီး ပွနျဆောငျ့ထညျ့တော့ စညျးခကျြညီစှာ အောကျကနေ ပေးခံနတေဲ့ မီးရဲ့မကျြနှာလေးက လဥကြောတကေိုပါစိမျ့ပွီး ပီးခငျြသလိုတောငျ ဖွဈသှားတယျ။
မီးရဲ့စောကျပကျလေးကလဲ ကပျြထုတျနတေော့ မနညျး ထိနျးထားရတယျ။ ……… မီး ရလား…”’ ……… ဟုတျ ကိုကွီး ရတယျ ဆကျဆောငျ့ပေး ကိုကွီး အားးးးးးအားးးးးးးအားးးးးအးးးးးးး…… ………အရမျးကောငျးတယျ ကိုကွီးရယျ အငျ့ ဟငျ့းးးးးး…”’ နို့တကေို လှမျးဆှဲပွီး အားနဲ့ ဆောငျ့ဆောငျ့ လိုးပေးနတော 10 မိနဈလောကျကွာတော့ မီးကော့ကော့ တကျသှားတယျ။ သခြောပွီ သူတခြီ ပွီးသှားပွီ။ ……… အားးးးးးးးအ ကိုကွီး မီး ပွီးသှားပွီ အငျးးးးး ဟငျးးးအားးးးးးးအ ……” ကနြျောလဲ မရတော့ဘူး ထိနျးမနိူငျတော့ဘူး။ မီးအပျေါကို မှောကျခလြိုကျပွီး ခါးအားကိုးနဲ့ အခကျြ၂၀လောကျ ဆကျတိုကျ ဆောငျ့ခပြွီး မီးစောကျဖုတျထဲကို လီးရညျအပွညျ့ ထညျ့ပေးလိုကျတယျ။ ကနြျောလဲ တျောတျော ပနျးသှားတော့ 5မိနဈလောကျ မီးအပျေါ မှောကျခလြိုကျပွီး မှိနျးနလေိုကျတော့တယျ။ လီးကတော့ မီးရဲ့စောကျပကျထဲမှာ စိမျထားတုနျးပဲ ကြှတျမထှကျသှားဘူး။
စောကျဖုတျကဉျြးတာက တကွောငျး၊ လီးကထှားတာက တကွောငျးဆိုတော့ လီးက မီးရဲ့စောကျပကျထဲမှာ ငွိမျနတေယျ။ မီးကလဲ ဟစိဟစိ လုပျပေးနတေော့ ဆှဲဆှဲ ညှဈပေးသလို ဖဈနတောပေါ့။ ခဏကွာတော့ ပွီးထားတဲ့အရှိနျနဲ့ အရကျရှိနျနဲ့ဆိုတော့ မီးရော ကနြျောရော မရတော့ဘူး။ နာရီကလဲ 3နာရီကြျောနပွေီ။ မီး အပျေါကနဆေငျးလိုကျပွီး မီးကိုဖကျ စောကျခွုံပွီး နှပျနလေိုကျတာ ခုမှပဲနိုးတော့တယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ မီးကိုလဲ ပိုငျဆိုငျရသလို မီးကိုလဲ ခဈြခှငျ့ရတဲ့အတှကျ အရမျးပြျောတယျ။ ညကအဖွဈတကေို ဝိုးတဝါး စဉျးစားရငျးနဲ့ ရငျခုနျသလိုလို ကွညျနူးနမေိတယျ။
ဟုတျတယျ ငါမှတျမိပွီ။ ညက ကိုကွီးနဲ့ငါ လိုးတာပဲ။ ငါဆာလို့ ရတေောငျးတယျ။ ကိုကွီး ရလောတိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ပွီးတော့ အို ရငျတခေုနျလိုကျတာ တကယျပါပဲ ကိုကွီးကို ခဈြတယျလို့လဲ ငါပွောလိုကျမိတာပဲ။ ရှကျလိုကျတာ ထူးတော့လဲ မထူးတော့ပါဘူး သူ့လီးနဲ့တောငျ လိုးပွီးနမှေပဲကို ရခြေိုးရငျး တှေးရငျး ရငျတခေုနျနတော ဒေါကျ ဒေါကျ ……… မီးမီးရေ လနျ့သှားတာပဲ ကိုကွီးချေါနတော။ ရှငျ ကိုကွီး ”…… ကွာနပေီနျော အအေးပတျနဦေးမယျ မွနျမွနျလုပျ ……… ဟုတျ ကိုကွီး ………… ကိုကွီးစောငျ့နမေယျနျော သှားစရာရှိတယျ ””” ……… ဟုတျကိုကွီး အဝတျစားထုတျတနေဲ့ ဆိုငျထဲက ထှကျလာတဲ့ စိုးမိုး ကားရှိဆီသို့လာပွီး အသိရှနေ့ဆေီကို ဖုနျးဆကျတရားရုံးမှာ ခြိနျးဆိုကာ ကှနျဒိုရှိရာသို့ ပွနျလာခဲ့တော့တယျ။
မီးမီး ဆိုဒျကိုမသိပမေဲ့ မှနျးကာ ၄စုံလောကျဝယျလာခဲ့လိုကျတယျ ။ အစိမျး အပွာ ပနျးနု မိုးပွာရောငျ ဝမျးစပျလေးကို မကျြစိအအေးဆုံး ရှေးဝယျခဲ့တာပေါ့။ သူနဲ့လိုကျမဲ့ နူတျခမျးနီ ပနျးဖြော့ဖြော့လေးရယျ မိတျကပျဗူးတစုံရယျ ရမှေေး ခေါငျးလိမျဆီ အသုံးဆောငျ နညျးနညျးပါးပါးနဲ့ တခြို့တဝကျ ဝယျခဲ့ပီးပွနျလာခဲ့လိုကျတယျ။ အပွငျက အသံလဲ မကွားရတော့ ထှကျဖို့ကို အခကျဖဈနတော ရခြေိုးခနျးထဲ ဘယျလိုလုပျရမှနျး မသိ မကျြစိကစားကွညျ့တော့ စငျလေးပျေါမှာ တဘကျတထညျတှတေ့ော့ ဝမျးသားသှားတယျ။ တဘကျလေး ယူပကျပဈလိုကျပွီး အပျေါအဝတျစားတဝေတျကာ ပွနျထှကျလာတော့ ကိုကွီးမရှိတော့ ဘာပွောကောငျးမလဲ။
စောငျတေ ဆှဲခပြွီး အတှငျးခံနဲ့ စကတျလေး ရှာဖှရေေး ဆငျးရပီလေ တှပေ့ါပွီ။ လုံးကလြေို့ ကောကျကာဝတျပွီး အိပျယာလေး ကကြနြနသိမျး ဧညျ့ခနျးထဲထိုငျပွီး ရောကျတကျရာရာစဉျးစားနတေုနျး တံခါးလေး ပှငျ့လာလို့ ကွညျ့လိုကျတော့ ကိုတျောခြော အထုတျတေ လေးထုတျ ငါးထုတျနဲ့ ဝငျခလြာပါတော့တယျ။ အတငျးထပွီးပွေးဆှဲ ပေးရတာပေါ့လေ။ အထုတျမြား ခုံပျေါတငျပွီး ခေါငျးလေးငုံထားပွီး မကျြနှာခငျြးမဆိုငျမိအောငျ ကွိုးစားလှဲဖယျနရေတဲ့အဖွဈ၊ အဲ့အခြိနျမှာပဲ ……… မီးမီး ……… တုနျခနဲ့ ဖဈသှားခဲ့ရတယျ။ ရှငျ ကိုစိုး …… …… ကိုကွီး မီးကိုလပျထပျရငျ မီးခှငျ့ပွုနိူငျမလား …… ကမြပြျောရမလား ဝမျးနညျးရမလား စဉျးစားလို့ မတကျတော့ပွီ။
မီး ကိုကွီးမေးတာကို ဖွလေေ.. လကျမခံနိူငျဘူးဆိုလဲ ကိုကွီး ဘယျလိုပွနျလုပျပေးရငျ ရနိူငျမလဲ… ကိုကွီးလဲ မစဉျးစားတကျတော့ဘူး.. မီးလကျခံနိူငျမယျဆိုရငျ ကိုတို့တရားရုံးသှားပွီး လကျမှတျထိုးမယျ…ပွီးရငျ မင်ျဂလာဆောငျမယျ… မီးအဖွကေို သိခငျြတယျ.. ကွညျဖွူစှာနဲ့ပဲ မြှျောလငျ့ပါတယျ ……… …… ဟုတျ ကိုကွီး မီး လကျခံပါတယျ.. ဒါမဲ့ မီးဒီပုံစံနဲ့သှားလို့ အဆငျပွနေိူငျမလား ကိုကွီး …… ပွုံးရောငျသမျးသှားတဲ့ ထောငျ့ခြိုးညီညီ နူတျခမျးလေးကွောငျ့ ရငျခုနျရပွနျတယ။ …… အဲ့အတှကျမပူပါနဲ့ ကိုကွညျ့ဝယျလာခဲ့တယျ.. အခနျးထဲ ဝတျကွညျ့ပေါ့……… အထုတျလေးတကေောကျဆှဲပွီး အခနျးထဲ ဝငျလာခဲ့တယျတယျ။ ကနြျောလဲ အနောကျခနျးထဲဝငျ ရမေိုးခြိုးပွီး အပွငျထှကျလာတော့ ညကသခြော မသိရပမေဲ့ မွငျလိုကျရတဲ့ မွငျကှငျးကွောငျ့ မီးမီး တျောတျောကနြေပျနမေိတယျ။
ဂငျြ ကစားတဲ့သူတလေို့ ဖုထှကျမနပေဲ ခပျြရပျတဲ့ ဗိုကျသားကယျြပွနျ့တဲ့ရငျအုံ၂ခုကွား အမှေးစပျစပျနဲ့ ခါးစောငျးကနေ ဆီးခုံဆငျးသှားတဲ့နရောက အမွှောငျးလိုကျ အကွညျ့လှဲခဲ့ရတယျ။ အရမျးလှတယျ မီးရယျ.…… ပနျးနုရောငျ ဝမျးစပျလေးကိုရှေးထားတယျ။ မိတျကပျပါးပါးလေးဖို့ပွီး နူတျခမျးကို ပနျးဆီရောငျလေး ဆိုးထားတယျ။ ကနြျော ပွေးနမျးခငျြစိတျတေ တဖှားဖှားပေါကျသှားပမေဲ့ ကိုယျဟနျဖို့ ထိနျးထားရတယျ။ မီး ရှကျနမှော စိုးလို့။ …… မီးမီး အရမျးလှတယျနျော… ခုလိုကွီး ဖွဈသှားတဲ့အတှကျ ကိုယျအနူးညှတျ တောငျးပနျပါတယျ.. မရညျရှယျခဲ့ပါဘူး မှားခဲ့တဲ့အတှကျ အပွညျ့အ၀ ကိုယျတာဝနျယူပါတယယျ.. ကဲကဲ လုပျစရာရှိတာလေးလုပျပွီး သှားကွမယျ… ဟိုမှာ ရှနေ့ကေို စောငျ့ခိုငျးထားတာ နျော …… ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ အဝတျစားတေ ကွညျ့ကောငျးမဲ့ တစုံဝတျပွီး ကားလေးနဲ့ နှဈယောကျတူ ခြိနျးဆိုထားတဲ့ တရားရုံးသို့ တကျလှမျးလာခဲ့တော့သညျ။
ဟိုရောကျတော့ ရှနေ့နေဲ့ စကားပွောဆိုပွီး လုပျဆောငျစရာမြားလုပျ ရှနေ့ကေို အသိသကျသထေားပွီး ကနြျောတို့၂ယောကျ တရားဝငျ လကျထပျပေါငျးသငျးလိုကျကွတယျ။ ဒါမဲ့ ရှနေ့တေဈယောကျကလှဲလို့ ဒီအကွောငျးတကေို ဘယျသူမှ ပေးမသိထားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မီးရဲ့ သိက်ခာနဲ့ အလုပျကိစ်စတကွေောငျ့ ခုလိုစီစဉျခဲ့ရတာပါ နောငျအခါခှငျ့သငျ့မှ မင်ျဂလာဆောငျကွဖို့ နှဈယောကျသား တိုငျပငျခဲ့ကွရတယျ။ မီးကလဲ နားလညျတယျ။ လကျမှတျထိုးပွီးတော့ ကားလေးနဲ့ မွို့လိုကျပတျပေါ့။ ဝယျစရာလေးတဝေယျ ကွညျနူးရတယျ။
အရမျးလဲပြျောဖို့ကောငျးတယျ။ ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ ခုလိုပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ လိုကျလညျရတော့ အရမျးပြျောစရာပေါ့။ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာတော့ အခနျးပွနျရောကျရငျကိုပဲ စဉျးစားရငျခုနျနမေိတာ အမှနျပဲ။ မီးရဲ့ ဘဝမှာ အပြျောဆုံးနတေ့နဆေို့ရငျတော့ မမှားပါဘူး အရမျးပြျောတယျ။ တရားဝငျ လကျထပျပွီးပွီဆိုတော့ လငျမယားတေ ဖွဈသှားကွပွီပေါ့။ ဒါဆို အခနျးပွနျရောကျတာနဲ့ ကိုကွီးက မီးကို… အို ရငျခုနျလိုကျတာ။ ဒီလိုနဲ့ ၄နာရီလောကျအခြိနျဖွုနျးပွီး စားစရာသောကျစရာတေ ဝယျကာ အခနျးပွနျလာခဲ့တော့တယျ။ …… မီးရေ ကိုကွီးတို့ အပွငျမှာထမငျးလဲ စားခဲ့ပွီဆိုတော့ အခနျးမှာပဲနားကွမယျကှာနျော …… ဟုတျကိုကွီး …… မီး.. ကိုကွီးရခြေိုးဦးမယျ မီးရော ခြိုးမလား …… ဟုတျ ခြိုးမယျလေ ကိုကွီးပွီးရငျ မီးခြိုးမယျ ခါးလေးညှတျပွီး မီးရဲ့နဖူးလေးကို ကိုကွီး နမျးသှားတယျ။
တကိုယျလုံးမှာရှိတဲ့ သှေးကြောတေ ဖငျြးကနဲ ကွကျသီးမှေးလေးတှပေါ ထောငျသှားတယျ။ ပွီးတော့ ကိုကွီးရဝေငျခြိုးတယျ။ ပွီးတော့ မီးခြိုးတယျ။ ပွီးတော့ ပွီးတော့..…… မီး လာလေ ကိုကွီးနားကို……… ဟုတျ …… ခေါငျးလေးငုံပွီး ကိုကွီးဘေး ဝငျအိပျလိုကျတယျ။ ကုနျတိုကျကဝငျဝယျလာတဲ့ ဂါဝနျပါးပါးလေးက အသားမှာ ကပျနသေယောငျ၊ မကျြလုံးကစားကွညျ့တော့ ဘောငျးဘီတိုလေးကို အတှငျးခံဝတျမထားဘူး၊ အထဲကနေ ခုံးကွှနတော။
အို ညက ဒီလီးကွီးနဲ့အလိုးခံခဲ့ရတာပါလား… ရငျတခေုနျလိုကျတာ .. အခုလဲမီးကို လိုးတော့မလို့လား မသိဘူး တှေးရငျးနဲ့ကို ပေါငျကွားက အစိလေးမာတငျးပွီး အရညျလေးတစေိမျ့နပွေီ ကိုကွီးက နဖူးကဆံပငျလေးတကေို သပျတငျပွီး နဖူးလေးကိုစနမျးတယျ။ ပွီးတော့ ပါး နူတျခမျး၊ မီးလဲ ပွနျနမျးပွနျစုပျတာပေါ့။ ပါးစပျထဲဝငျလာတဲ့ ကိုကွီးလြှာကို ပွနျစုပျ၊ မီးလဲပွနျထိုးထညျ့နဲ့ တျောတျောခရီးရောကျနပွေီ။ ကိုကွီး နမျးနတောကို ရပျပွီး လညျပငျးနဲ့ လညျပငျးစောငျးတကေို နမျးလိုကျယကျလိုကျ လုပျပေးနတေယျ။ မီး ထိနျးထားပမေဲ့ မရတော့ဘူး။ ……… အငျး ဟငျး ဟငျ့ ကို ကွီး အာ့ အား ဟငျ့ ကိုကွီးရေ ………… ကောငျးလား မီး ………… အငျး အရမျးကောငျးတယျ အား နမျးနတော ယကျနတော အသားကဖွူတော့ အနီကှပျလေးတပေါဖဈတယျ။
မီး………ရှငျ ဟငျ့ ကိုကွီး……… အဝတျစားတခြှေတျလိုကျမယျနျော……… ဟုတျ ကိုကွီးအဝတျစားတခြှေတျပွီးတော့ နို့သီးခေါငျး ပနျးရောငျလေးတကေို ဆှပွီး ကလေးလေးလို စို့ပေးနတေယျ။ ……… အား အား ကောငျးတယျ ကောငျးလိုကျတာ ကိုကွီးရယျ… ကိုကွီးလဲ အဝတျစားတခြှေတျကှာ ………… စို့နရောက ရပျပွီးတော့ အဝတျစားတေ ခြှတျပဈလိုကျတယျ။ ………… ဝိုးးး နညျးတဲ့လီးကွီးလား…………… ပွှတျခနဲ ညှဈခလြိုကျမိတဲ့စောကျရညျတေ အိပျယာခငျးမှာ မွခေခဲ့ရတယျ။ ကိုကွီးက ဗိုကျသားတကေို ဆကျယကျပေးနတေယျ။
မီးလေ လောကကွီး အပွငျဘကျကိုရောကျသှားတယျ။ အသကျရှူသံတလေဲမွနျမွနျလာတယျ။ စောကျရညျတလေဲ ရှဲနပွေီ။ တဆငျ့ပီးတဆငျ့ ယကျလာတာ ဆီးခုံလေးကိုနမျးပွီး စောကျဖုတျကို ယကျနပေါပွီ။ မီး မထိနျးနိူငျတော့ဘူး။ ကိုကွီး က ဆရာကတြယျ။ လကျခလယျလေး ထိုးထညျ့ပွီး အစိကို လြှာဖြားလေးနဲ့ ကလျောပေးနပွေီး လကျက ဂြီစပေါ့ ကို ကုတျပေးနတေယျ။ ……… အား ကိုကွီး မီးကိုသတျနတောလား… အားကောငျးတယျ ကိုကွီး… အား အငျး အငျ့ အိုး အား .. ကောငျးတယျ ကောငျးတယျ… အား ကိုကွီး မီးပီးတော့မယျ… အားကိုကွီး ဖယျ ဖယျ … အား ကိုကွီး အ အ အ အား စောကျရညျတေ ရှဲပဈပွီး ကိုကွီး မကျြနှာတရှေဲကုနျတာ။
ကိုကွီး မီးပွီးသှားပွီ ……… အငျး ကောငျးလား မီး ကိုလုပျပေးတာ ……… ဟုတျ အရမျးကောငျးတယျ ကိုကွီး စောကျရညျတေ တံတှေးတပေကေနျြနတေဲ့ စောကျပကျကို မဆေးပဲ သူ့လီးကွီးကို အရငျးကနေ ကိုငျပွီး တရဈခငျြးဆီ စသှငျးပါတော့တယျ။ တျောသေးတယျ အရညျတေ ရှိနလေို့သာပေါ့။ ………… အ အား အား ကိုကွီး ကောငျးလိုကျတာ ………… လီးကွီးကို အဝငျခြောအောငျ ပေါငျ၂ခြောငျးကို ကားနိူငျသလောကျ ကားထားပေးတယျ။ စောကျခေါငျးထဲကို လီးဝငျလာတော့မှ လိုအပျခကျြတေ ပွညျ့စုံသှားသလို ခံစားရတယျ။ ……… မီး ကိုကွီး လိုးမယျနျော ……… ဟုတျ ကိုကွီး လိုးပါနျော ဒိစောကျပကျက ကိုကွီးအတှကျ သီးသနျ့ပါနျော။
လိုးပါ ကျုကွီးရယျ မီး အရမျးကောငျးနပွေီ… အား အား အား ………… ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး..ဖလောကျ ဖလောကျ ဖလောကျ ဘှတျ ဘှတျ ……… အား အား အား အား ကောငျးလိုကျတာ ……… ……… ကွိုကျလား ငါလိုးတာ ပွော ……… ဟုတျကောငျးပါတယျ လိုးပါ လိုးပါ ……… ……… မပူနဲ့ လိုးပေးမယျ တနလေုံ့း ………… ……… အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ အား အား အား အား အား ကိုကွီး လိုးပါအရမျးကောငျးတယျ ””” ကိုကွီး ဒဈက ကားတယျ ကားတော့ အထုတျအသှငျးတိုငျးမှာ ဂြီစပေါ့ ကို ခြိတျခြိတျဆှဲတော့ မီး မခံနိူငျ ပုံစံနောကျတမြိုး မပွောငျးခငျမှာပဲ မီးနောကျတခြီပွီး ခဲ့ရတယျ။
ခံလို့က ကောငျးနဆေဲ။ ဖောငျး ဖောငျးးးဖောငျး ဖောငျးးးးးဖောငျးးးးးး ……… အားအား အားးးးအားးးးးအားးး လိုးပါ လိုးပါ ကွမျးးကွမျးလိုးပါ ”’ ဖောငျးဖောငျး ဖောငျးးးးးဖောငျးးးးဖောငျးး. အခကျြ ၅၀ လောကျ ဆကျတိုကျဆောငျ့လိုးပွီး လီးကို ဆှဲခြှတျလိုကျတော့ မီးရငျထဲက ကလီစာတေ ဆှဲထုတျလိုကျသလို ဟာတာတာကနျြခဲ့တယျ။ ……… မီးရေ လေးဘကျထောကျပေးနျော ……… ဟုတျ ကိုကွီး ……… ပွောပွီး နရောပွငျပေးတယျ။ ပွီးတော့ ခါးလေး နညျးနညျးခှကျဖငျလေးကော့ထားခိုငျးတယျ။
မီး ရဲ့ ကားထားတဲ့ ပေါငျ၂ခြောငျးကွားက စောကျပကျကွီးက ပွူးပွီးတော့ စောကျရညျတနေဲ့ဝငျးလကျနတော။ ………… မီး ကိုလိုးတော့မယျနျော ………… ဟုတျ ကို .. အား ကောငျးလိုကျတာ ကိုရယျ ””’ ကိုကွီးက ခါးကိုကိုငျပွီး ဆှဲဆောငျ့လိုးတာ အောငျ့ပမေဲ့ အရမျးခံလို့ကောငျးတာ။ဖောငျးဖောငျး ဖောငျးးးးးဖောငျးးးဖောငျးးး လိုးတာ မနားဘူး။ ဖွနျး ဖွနျး ဘယျရော ညာရော ၂ဖကျ အရိုကျခံလိုကျရတော့ နာတာရော စိတျပါထလာတယျ။
ရိုကျပါ ကိုကွီး မီး အရမျးကောငျးတယျ အား အား အား ကောငျးလိုကျတာ ရှငျ.. လိုးလိုးကွမျးကွမျးလေး ……… ခါးကကိုငျထားတဲ့ လကျကို ဖွုတျပွီး မီးရဲ့ ဆံပငျကို အရငျးကနစေုကိုငျပွီး ဆံပငျဆှဲလိုးပါလရေော။ ……… အား ကောငျးလိုကျတာ ကိုရယျ လိုးပါ လိုးပါ ကွမျးကွမျးလေး ………… အနအေေးသလောကျ အရမျးထနျတဲ့ မီး လိုးခံဖို့ တောငျးဆိုနတော ကလေးမုနျ့ပူသလို တဆာဆာ။ ……… ကောငျးလား ”””’ ဖွနျးဖွနျး ……… အား အား ”””’ ဆံပငျလဲ ဆှဲအလိုးခံရ၊ ဖငျလဲ ခခြံရ ကောငျးလိုကျတာ။ ……… မီးရေ ကိုကွီး အသားကုနျလိုးတော့မယျနျော ””” ……… ဟုတျကိုကွီး ရတယျ လိုးလိုး ””” ဆံပငျကို တဖကျ ပခုံးကိုတဖကျဆှဲပီး အသားကုနျလိုးဆောငျ့ပဈတာ။
ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး ”’… အားးး အားးး ကို လိုးးပါ အား ””’ ဖောငျးဖောငျးးးး ……… အား ကောငျးတယျ လိုးလိုး ””” ဖောငျး ဖောငျးးးးဖောငျးး ………… အားအား ပွီး ပွီး မီး ပွီးပွီ ကို အား အား ””’ တရစပျ အခကျြ ၅၀လောကျ လိုးပဈပွီးတော့ စောကျပကျထဲကို ကိုကွီး လီးရညျ အပွညျ့ ထညျ့ပေးခဲ့တယျ။ ……… အား အား အား အားးးးး ………… လီးကိုမထုတျသေးပဲ မီးစောကျပကျထဲ စိမျထားပွီး မီး အပျေါမှောကျအိပျနလေိုကျတယျ။ 5မိနဈလောကျ နပွေီးတော့ လီးက ပလောကျဆို မီးစောကျပကျက ကြှတျထှကျသှားတယျ။ ……… ပွတျ ””” လီးရညျတစေီးကလြာတာ နှမြောစရာ။
၂ယောကျသား ဖတျအိပျ လိုကျကတြယျ။ တရေးနိုးတော့ တခါထလိုး ရခြေိုး ထမငျးစားကွပွီး ညကွတော့ လိုး သတိရတခါလိုးပေါ့။ ……… မီး အစှဲကွီးစှဲသှားမိပွီ ကိုကွီး အရမျးခဈြတယျ ””” နောကျပိုငျးတော့ သူ့အခနျးသူနေ မီးလဲ အဆောငျပွနျနပေေါ့။ လှမျးတိုငျး တလ ၅ခါလောကျတော့ Hotel ချေါလိုးခံရတာပဲ။ ရုံးမှာကွတော့ မလှပျလပျလို့လေ။ ဟိုကိုငျ ဒီကိုငျ၊ အစပြိုးပွီးရငျ Hotel ချေါလိုးနဲ့ မီးစောကျပကျလဲ အသားပိုလေးတတေောငျ ထှကျလို့နပေါပီရှငျ ……… ပွီးပါပွီ။
မီးရဲ့နာမည် က နှင်းရတီ။ အသက်ကတော့ 23 နှစ်။ မန်နေဂျာလက်ထောက်။ မီးက နယ်ကပါ။ ရေကြည်ရာမြက်နုဆိုသလို အလုပ်ကိုင် ပေါများရာ ရန်ကုန်ရွေမြို့တော်ကြီးဆီသို့ တက်လှမ်းရာ ကိုကြီးနဲ့ ဆုံရတာ။ ကိုကြီးက မီးရဲ့အထက်လူကြီး မန်နေဂျာ။ ကိုကြီးလို့သာ ခေါ်တာပါ။ ခုဆို ကိုကြီးအသက်က 40 ပြည့်ပြီ။ ချစ်လွန်းလို့ ကိုကြီးလို့ခေါ်တာ။ ကိုကြီး နာမည်က စိုးမိုးအောင် လူအေးလို့ပြောရင် မမှားဘူး။ အကြီးအကဲတေနဲ့ဆုံရင် သောက်ဖြစ်တာကလွဲလို့ အားလုံးရှင်းတယ်။ မီးရဲ့ ပထမဦးဆုံးဆိုတာထက်ပိုတဲ့ ကိုကြီး မီးရဲ့ အရာရာ ပထမဦးဆုံးသော ကိုကြီး။ အဲ့နေက အင်တာဗျူးတဲ့နေ ကိုကြီးနဲ့စဆုံရတဲ့နေ့ ကိုကြီးကို မကြည့်ရဲဘူး။
လက်ရှိမှာကိုယ့်ကို စီစစ်ကြီးကြပ် မေးခွန်းတေနဲ့ သက်မဲ့သူကြီးလေ။ ခေါင်းကိုသာ ငုံ့ထားရင်း မေးတဲ့မေးခွန်းတေကို တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ဖြေနေရတဲ့ မီးကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားတဲ့ ကိုကြီးလေ ဒီလိုနဲ့ မီးလဲ ကိုကြီးရဲ့ လက်ထောက် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ။ ကိုကြီးဆီက ရိသဲ့သဲ့တို့ မထိတထိတို့ စကားတေအပြုအမူတေကို ယောင်လို့တောင် မရခဲ့ဘူး။ အနေတည်တယ် ပြောရင်ပြတ်တယ် လုပ်ရင် ရှင်းတယ်။ အခုရွုပ်မှ နောင်ရှင်း တခါတည်းလုပ်တယ်။ ဒါမဲ့ လက်အောက် ငယ်သားတေကို ကြည့်တယ်။ မနိူင်ဝန်မထမ်းခိုင်းဘူး။ ကိုယ့်မှာသာ ရေလာမြောင်းပေးရတာ အမော ကိုယ်တော်ချောက ခပ်တည်တည်။
ဆုံခဲ့ရတဲ့တနေ့ သူ့ရဲ့မွေးနေမှာ သူဌေးက ကိုကြီးကို ဘောက်ဆူးအများကြီး လက်ဆောင်ပေးတယ်။ အာ့ကြောင့် ကိုကြီးက ကေတီဗွီ လိုက်ပို့ပေးတယ်။ လက်အောက်ငယ်သားတေနဲ့ ကိုကြီးဟာ အဲ့ညမှ သူငယ်ချင်း ဘော်ဒါတေလို တသွေးတည်း တသားတည်းနဲ့ အရမ်းပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ညပေါ့။ ကိုကြီးအတွက် တက်နိူင်သလော လက်ဆောင်ပေးမယ်ပေါ့။ ကိုယ်တေစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုကြီး မယူခဲ့ဘူး။ လုံးဝလက်မခံဘူး သူပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ အားလုံးကို ဒကာခံကာ ပျော်ခဲ့တာည ဖြစ်သလို မီးနဲ့ကိုကြီးရဲ့ အချစ်ည ရင်ခုန်သံဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ အပျိုရည် ပျက်ခဲ့တဲ့ည၊ ငိုခဲ့ရတဲ့ည၊ ပျော်ခဲ့ရတဲ့ည။
အဲ့ညက ကိုကြီး မီးကို………… အမြည်းကျွေးသည်။ ခေါင်းတခုလုံးချာချာလည် မူးနောက်ပြီး မျက်စိ၂လုံးဖွင့်လိုက်ရင်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး အရာရာဟာ အစိမ်းသက်သက် စိမ်းဖန့်ဖန့် ဆေးသားနဲ့ မျက်နှာကျက် အေးစိမ့်စိမ့် ရှိလှတဲ့ Aircon Room ? ဒါဆိုရင် ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ အိစက်ညက်ညောလှတဲ့ မွေ့ယာကြီးနဲ့ ခြုံထားတဲ့ စောင်ဖြူဖြူအကြီးကြီး ဇဝေဇဝါနဲ့စဉ်းစားနေရင်းမှာပဲ မျက်လုံးအစုံပြူးကျယ်စွာဖြင့် စောင်လေးဟ၍ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်တော့ သွားပြီ။ ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတလျှောက် အပျိုစင်ဘဝကို ဆုံးရွူံးလိုက်ရပြီ။ တဆက်တည်း ဘေးကိုကြည့်တော့ ကိုကြီး မနိုးသေး အိပ်နေတုန်း။ ဘယ်လိုမေးရမလဲ ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။
ထမယ်အလုပ်မှာ ပေါင်ကြားမှ စပ်ဖျင်းဖျင်းဝေဒနာ စိုးရိမ်စိတ်က ငယ်ထိပ်ရောက်နေပြီ။ အပေါ်ပိုင်း အဝတ်စားရှိပေမဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ဘာမှမရှိတော့ ကိုကြီး ညက မီးကို ကောင်းကောင်း လိုးထားတာပေါ့။ နှမျောမိသလို ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ ဖြစ်နေရတယ်။ ဝမ်းနည်းတာက အပြည့်အဝ မခံစားခဲ့ရတာ ဝမ်းသာတာက ကိုကြီးကို မီးရဲ့ အပျိုစင်ဘဝလေးကိုပေးခဲ့ရလို့။ နှမျောတာကတော့ တသက်လုံးထိမ်းသိန်းခဲ့တဲ့ အပျိုစင်ဘဝလေး ဆုံးရွူံးခဲ့ရလို့။ ဒါမဲ့ လောလောဆယ်မှာ တိုင်ပတ်နေတာက အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ စကတ် ရှာမရ။ ဘော်လီက ချိတ်တေပြုတ်နေ။ ဒါက ကိစ္စမရှိ ပေါင်ကြားကလဲ တောင့်တင်းတင်းနဲ့မို့ ရေချိုးချင်နေပြီ။ တော်သေးသည် ကိုကြီး မနိုးသေး။
မထူးတော့ပြီမို့ မျက်စိကစားကြည့်တော့ ရေချိုးဟုထင်ရသည့် အခန်းကိုတွေ့၍ စောင်ခြုံထဲမှ ထပြီး တန်းပြေးလာခဲ့တော့တယ်။ အခန်းတံခါးဖွင့်ပီး အခန်းထဲဝင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အပေါ်မှာရှိသည့် အဝတ်များအားချွတ် ရေပန်းဖွင့်ပြီး တစိမ့်စိမ့် ချိုးပစ်နေတယ်။ သိမ့်ကနဲ လုပ်သွားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် စိုးမိုး ကိုလွုပ်နိုးသလို ဆက်ခနဲ လန့်နိုးသွားတယ်။ ဘေးကိုကြည့်တော့ မီးမီးမရှိတော့ ရေသံလေး သဲ့သဲ့ကြားနေရတော့ ရေချိုးနေပြီဆိုတာ သိပြီ။ စိုးမိုးညက အဖြစ်ကိုပြန်စဉ်းစားရင်း ကျေနပ်စွာ ပြုံးမိနေတော့တယ်။ ညအချိန်အားဖြင့် 1နာရီ ကျော်နေပြီမို့ သူ့ရဲ့ Alphard ကားကြီးဖြင့် တယောက်စီဝင်ပို့ရင်း နောက်ဆုံး မီးမီး ကို ပို့ဖို့ ကျန်တော့တယ်။
မီးမီးကို သူကြိတ်ကြိုက်နေတာ။ ဒါပေမဲ့ သူ့စိတ်ကို ထိန်းခဲ့သည်။ ကိုယ်လဲ အောက်ခြေက တက်ခဲ့သည်မို့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတေကို နိူင်ထက်စီးနင်း မလုပ်စေချင်လို။ ဒါကြောင့် ဆန္ဒကို သိက္ခာဖြင့် ထိန်းခဲ့ရသည်။ မီးမီး အဆောင်နဲ့မလှမ်းမကမ်းလေးမှာ ရပ်ပြီး တံခါးဖွင့် မီးမီးကို နိုးကြည့်တော့ မီးမီး တော်တာ် များနေပြီ။ မနိူင်တော့ အထိတွေ့မှာလဲ သာယာနေမိသိ။ ကျနော် လက်ကလေးကိုပြီး လုပ်နိုးနေပေမဲ့ မီးမီးမနိုးတော့ ဘာတေပြောမှန်းလဲ မသိ။ ဒီပုံစံနဲ့ဆို မီးမီးကိုထားခဲ့လို့မဖြစ်တော့ သူ့အခန်းသို့သာ ခေါ်ခဲ့တော့တယ်။ စိုးမိုး နေသည့် တိုက်ခန်းကိုရောက်တော့ အချိန်ကား 2နာရီကျော်ခဲ့ပြီ။
ကားကိုပါကင်ထိုးပြီး မီးမီး ကို ကူ၍တွဲချ မီးမီး လက်တဖက်ကို သူ့ပခုံးပေါ်တင် ဟိုဘက်လက်ဂျိုင်းအောက်ကနေသိုင်းပြီး 3လွာသို့ တက်လာခဲ့ပြီး စိုးမိုးအခန်းရှေ့ရောက်တော့ မီးမီးထိန်းမရတော့ ဘယ်ဘက်လက်က ဘောင်းဘီအိတ်နွိုက်တော့ သော့က ဘောင်းဘီညာဘက် အိတ်ကပ်ထဲမှသော့က ညာဘက်မှာက မီးမီး ရှိနေတော့ မီးမီးကို နေရာပြောင်းပြီး သော့နိူက်ရန်အတွက် စိုးမို့ ဘယ်ဘက်သို့ မီးမီးကို ပြောင်း ညာဘက်လက်က ညာဘက်အိတ်ထဲနွိုက်နေချိန် မီးမီးက အငြိမ်မနေ မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်မှာမော့ကြည့်ပြီး ……… ။
ကိုကြီး မီးကို ဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲ ””” လို့ တလုံးတည်းပြောပြီး မျက်လုံးပြန်မှိတ်ကာ ကျတော့်ကို ဖက်ထားလိုက်တယ်။ ကျနော့် ရင်ထဲ ကုလားဘုရားပွဲလှည့်သွားတယ်။ ခက်တာက အောက်က ညီတော်မောင် မစားရတာ တော်တော်ကြာပြီမို့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ၂ထပ်ခံထားတာတောင် အောက်က ကုန်းထလာတယ်။ မီးမီးရဲ့ ရင်သားအိအိလေးတေက ကျနော့်ကို ကျီစားနေသလိုလို ကျနော့်လီးက မာသထက်မာလာနေပြီ။ မီးမီးရဲ့ ဆီးခုံကို ထောက်နေပြီ။ မီးမီးကလဲ ငြိမ်ငြိမ်မနေ ဟိုလွုပ် ဒီလွုပ်ဆိုတော့ ဆွပေးနေသလို မြန်မြန် သော့ကိုဖွင့်ပြီး အိပ်ယာထက် မီးမီးကို တင်လိုက်ပြီး စောင်သေချာခြုံပေးပြီး အအေးကို နည်းနည်း လျော့လိုက်တယ်။
စိုးမိုး မျက်နှာသစ် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းပြီး ဘောင်းဘီ ဒူးကျလေးနဲ့ စပို့ရှပ်လက်တိုလေးဝတ်ပြီး စောင်တထည် ယူ ဧည့်ခန်းဆိုဖာပေါ်နေရာယူပြီး မီးမှိတ်အိပ်မယ်အလုပ် မီးမီးးထံမှ ညည်းသံကြားရပြီး ကျနော်လန့်နို့လာတယ် ……… ရေဆာတယ် ရေဆာတယ် ””” အော်နေတော့ ကျနော် မနေသာတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေတဗူးထုတ်ပြီး မီးမီးကိုထူမ၍ ရေတိုက်လိုက်တယ် မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်တယ်။ ………ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကြီး ””” တဲ့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့မီးမီး စိတ်တေ ထိန်းထားခဲ့ရတာမနည်း အောက်က ညီတော်မောင်က တွင်းနံ့ရတာနဲ့ ဝင်အောင်းချင်နေတာ ခေါင်းထောင်ထလာတယ်။ ……… ကိုကြီး မီးနားမှာနေနော် မီး မူးတယ် ””’ ပြောပီး ကျနော့် လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ပြီး ကျစ်နေအောင်ဖက်ထားတယ်။
အင်းပါ မီးမီးရယ် ကိုယ် အနားမှာရှိပါတယ် ””” ပြောပြီး ရေဘူးကို ခုံပေါ်လှမ်းတင်ပြီး ဒီဘက်အလှည့် အောက်က ဘော့ပင်ကို နင်းပြီး ခြေချော်အိပ်ယာပေါ်သို့ ၂ယောက်သားဖက်ယက် လှဲကြတော့မှ ဇာတ်လမ်းက လှတာ။ မီးမီး မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီး တိုးတိုးလေးပြောတယ်။ …… ကိုကြီး မီးကိုကြီးကို ချစ်တယ် ””” တဲ့ ပြောရုံပဲမဟုတ် နူတ်ခမ်းကိုပါနမ်းတော့ စိုးမိုးဆိုတဲ့ ကျနော် ဘာသားနဲ့ထုထားတာ ဟုတ်လို့တုန်း မီးရဲ့ နူတ်ခမ်းကို ဖက်နမ်းနေတာ အကြာကြီး ငတ်နေတာလဲ ကြာပြီဆိုတော့ လီးက တော်တော်ကို တင်းနေပြီ။ နမ်းရင်း လက်တေက နို့တေကို ကိုင်ညှစ်နေရာကနေ ကျောအောက် လက်လျိုပြီး ဘောလီချိတ်တေကို ဖြုတ်၊
စကတ်လေးကို ဆွဲချွတ်၊ ပန်းရောင် အတွင်းခံလေးက ဆွဲဆောင်ချင်စရာကောင်းပြီး ချစ်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ လေးဖစ်တဲ့ မီးမီး ရဲ့စောက်ပက်နေရာလေးက အရည်ကြည်လေးတေနဲ့ စိုနေတာကြောင့် အရည်ကွက်ထနေပြီ။ လက်ဝါးအပြားလိုက် အုပ်လိုက်ပြီး အပေါ်ကို ပွတ်ဆွဲ တက်သွားလိုက်ရာ အဖုတ်အမြှောင်း အတိုင်း လက်ခလယ်လေးက အဖုတ်အမြှောင်းကို ပွတ်ဆွဲတက်သွားပြီး အပေါ်တက်အောက်ဆင်း အလုပ်ပေးနေလိုက်တယ်။ အင်္ကျီကိုလှန်တင်ပီး ရဲနေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတေကို အားရပါးရနယ် စို့ပြီးတော့ ဆီးခုံလေးကို တက်တက်မက်မက် နမ်းရင်း လီးက မနေနိူင်တော့ အတွင်းခံလေးကိုပါ ဆွဲချွတ်ပြီး မီးမီးရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ကျနော် နမ်းပစ်မိတယ်။
လူတေ နံတယ်ပြောတဲ့စောက်ပက်အနံ့ကကို လီးတောင်စေတာ လျှာနဲ့တချက်ဆွဲယက်ပြီး ကျနော် မီးမီး ခြေ၂ချောင်းကို နေရာချပြီး အလည်မှာ နေရာယူလိုက်တယ်။ ကျနော်လဲ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ကျနော့်ရဲ့ အရှည် 7လက်မ လုံးပတ်6လက်မရှိတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ လီးကိုကိုင်ပြီး မီးမီးရဲ့ စောက်ပက် ဝကိုတည့်ပြီး ထိုးချလိုက်တော့တယ်။ ……… အား အားနာတယ် နာတယ် အား …”” စူးစူးဝါးဝါး အော်သံကြောင့် ခဏရပ်လိုက်ပြီး အောက်ငုံ့ကြည့်တော့ သွေးစလေးများနဲ့ ဆီးကြိုနေတယ်။ မီးမီး က လုံးဝပါကင်ပေါ့ ကျေနပ်ပြီလေ။ စိုးမိုး ကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်ပြီး မီးမီးရဲ့ နဖူးလေးက်ု နမ်းရင်း ………ဟင်း ဟင်း နာတယ် ကိုကြီး နာတယ် မလုပ်ပါနဲ့တော့နော် …”’ ……… အင်းပါ မီးရဲ့ ကိုဖြည်းဖြည်းပဲ လုပ်ပေးမယ်နော်…”’ ခေါင်းလေးကိုလဲပွတ် စကားလေးနဲ့လဲချော့ လီးကလဲ
ဒစ်ပဲဝင်သေး ဖြည်းဖြည်းချင်းညှောင့်ရင်း ဘေးဘီလှည့်ကြည့်တော့ ဂျယ် တွေ့လို့ လှမ်းယူပြီး လီးကိုဆွဲထုတ် ဂျယ် ကို လီးမျာများများလိမ်းကာ မီးရဲ့စောက်ဖုတ်ဝလေးမှာ တည်၍ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိချလိုက်တော့တယ်။ ……… အ အ အ နာတယ် နာတယ် ကိုကြီးရေ သေပါပြီရှင် နာတယ် နာတယ် ကိုကြီး အဟင့် ဟင့် နာတယ် အ အားးးးး…”” စိုးမိုး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော့ ဒစ်ဝင်နေပြီဆိုတော့ 2လက်မ နီးနီးလောက် ဝင်နေပြီ။ 5လက်မလောက် အပြင်မှာ ကျန်နေသေးတော့ အားမရချင် အထဲမှာလဲ အမြှေးက ခံနေတယ်။
မီး မီး ခါးကို ကိုင်ပြီး ဂျယ် နဲ့မီးရဲ့စောက်ရည် ချွဲလေးတေကို အားကိုးပြီး အားပါပါနဲ့ တချက်ပဲ စောင့် လိုးချလိုက်တယ်။ ……… အား အားးးးးနာတယ် ကိုကြီး ဟီး ဟီး …”” ပါးစပ်လေးကို လှမ်းပိတ်ပြီး နားနားကို ကပ်ပြောလိုက်တယ်။ ……… တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာလိမ့်မယ် မီးရယ် ခဏလေးသည်းခံနော် သိလား ကလေး ကလေးက လိမ္မာပါတယ် …”” မျက်ရည်လေးတေ မျက်ဝန်းထောင့်မှာ လှိမ့်ကျလာပြီး ……… ဟုတ် ကိုကြီး ””” လို့ တလုံးတည်းပြောပြီး ဖိုထိုးနေတဲ့ ရင်အစုံကို ကျနော် ညှစ်ကစားပေးပြီး နူတ်ခမ်းတေကို နမ်းစုပ်ပြီး အောက်က အရင်းထိဝင်နေတဲ့လီးကို တလက်မစာလောက် အထုတ်အသွင်းလေးနဲ့ ညှောင့်ပေးနေတယ်။ လည်ပင်းတေကိုနမ်း၊ လျှာနဲ့ယက်ပေး၊
နို့လဲ အညှစ်ခံရ အောက်ကလဲ ညှောင့်ပေးနေတော့ မီးဆီကနေ လိုချင်တက်မက်တဲ့ အသံလေးတေ ထွက်လာနေပြီ။ ……… အင်း ဟင်းဟင်းးးးးးး အား အ အားးးးးး ကောင်းလိုက်တာ အား…”” လက်တေက စိုးမိုးလည်ဂုတ်ကို သိုင်းဖက်ထားလိုက်တယ်။ အချက်ပြလိုက်သလို အသံလေးတေကြားရတော့ စိုးမိုးလီးကို ပိုထုတ်ပြီး ပြန်ဆောင့်ပေးနေတယ်။ …ဖလောက် ……ဖလောက် ….. ..ဖလောက် … ဂွေးဥနဲ့ ဖင်၂လုံကြား ရိုက်သံလေးတေတောင် ထွက်လာပြီ။ ……… အားးအားးအားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီး ကောင်းနေပြီ မီးအရမ်းကောင်းနေပြီ …”” စိုးမိုးသိပြီ။ လီးကို ဒစ်နားထိ ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်ဆောင့်ထည့်တော့ စည်းချက်ညီစွာ အောက်ကနေ ပေးခံနေတဲ့ မီးရဲ့မျက်နှာလေးက လဥကျောတေကိုပါစိမ့်ပြီး ပီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။
မီးရဲ့စောက်ပက်လေးကလဲ ကျပ်ထုတ်နေတော့ မနည်း ထိန်းထားရတယ်။ ……… မီး ရလား…”’ ……… ဟုတ် ကိုကြီး ရတယ် ဆက်ဆောင့်ပေး ကိုကြီး အားးးးးးအားးးးးးးအားးးးးအးးးးးးး…… ………အရမ်းကောင်းတယ် ကိုကြီးရယ် အင့် ဟင့်းးးးးး…”’ နို့တေကို လှမ်းဆွဲပြီး အားနဲ့ ဆောင့်ဆောင့် လိုးပေးနေတာ 10 မိနစ်လောက်ကြာတော့ မီးကော့ကော့ တက်သွားတယ်။ သေချာပြီ သူတချီ ပြီးသွားပြီ။ ……… အားးးးးးးးအ ကိုကြီး မီး ပြီးသွားပြီ အင်းးးးး ဟင်းးးအားးးးးးးအ ……” ကျနော်လဲ မရတော့ဘူး ထိန်းမနိူင်တော့ဘူး။ မီးအပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်ပြီး ခါးအားကိုးနဲ့ အချက်၂၀လောက် ဆက်တိုက် ဆောင့်ချပြီး မီးစောက်ဖုတ်ထဲကို လီးရည်အပြည့် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်လဲ တော်တော် ပန်းသွားတော့ 5မိနစ်လောက် မီးအပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး မှိန်းနေလိုက်တော့တယ်။ လီးကတော့ မီးရဲ့စောက်ပက်ထဲမှာ စိမ်ထားတုန်းပဲ ကျွတ်မထွက်သွားဘူး။
စောက်ဖုတ်ကျဉ်းတာက တကြောင်း၊ လီးကထွားတာက တကြောင်းဆိုတော့ လီးက မီးရဲ့စောက်ပက်ထဲမှာ ငြိမ်နေတယ်။ မီးကလဲ ဟစိဟစိ လုပ်ပေးနေတော့ ဆွဲဆွဲ ညှစ်ပေးသလို ဖစ်နေတာပေါ့။ ခဏကြာတော့ ပြီးထားတဲ့အရှိန်နဲ့ အရက်ရှိန်နဲ့ဆိုတော့ မီးရော ကျနော်ရော မရတော့ဘူး။ နာရီကလဲ 3နာရီကျော်နေပြီ။ မီး အပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပြီး မီးကိုဖက် စောက်ခြုံပြီး နှပ်နေလိုက်တာ ခုမှပဲနိုးတော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မီးကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်ရသလို မီးကိုလဲ ချစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းပျော်တယ်။ ညကအဖြစ်တေကို ဝိုးတဝါး စဉ်းစားရင်းနဲ့ ရင်ခုန်သလိုလို ကြည်နူးနေမိတယ်။
ဟုတ်တယ် ငါမှတ်မိပြီ။ ညက ကိုကြီးနဲ့ငါ လိုးတာပဲ။ ငါဆာလို့ ရေတောင်းတယ်။ ကိုကြီး ရေလာတိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပြီးတော့ အို ရင်တေခုန်လိုက်တာ တကယ်ပါပဲ ကိုကြီးကို ချစ်တယ်လို့လဲ ငါပြောလိုက်မိတာပဲ။ ရှက်လိုက်တာ ထူးတော့လဲ မထူးတော့ပါဘူး သူ့လီးနဲ့တောင် လိုးပြီးနေမှပဲကို ရေချိုးရင်း တွေးရင်း ရင်တေခုန်နေတာ ဒေါက် ဒေါက် ……… မီးမီးရေ လန့်သွားတာပဲ ကိုကြီးခေါ်နေတာ။ ရှင် ကိုကြီး ”…… ကြာနေပီနော် အအေးပတ်နေဦးမယ် မြန်မြန်လုပ် ……… ဟုတ် ကိုကြီး ………… ကိုကြီးစောင့်နေမယ်နော် သွားစရာရှိတယ် ””” ……… ဟုတ်ကိုကြီး အဝတ်စားထုတ်တေနဲ့ ဆိုင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ စိုးမိုး ကားရှိဆီသို့လာပြီး အသိရှေ့နေဆီကို ဖုန်းဆက်တရားရုံးမှာ ချိန်းဆိုကာ ကွန်ဒိုရှိရာသို့ ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။
မီးမီး ဆိုဒ်ကိုမသိပေမဲ့ မှန်းကာ ၄စုံလောက်ဝယ်လာခဲ့လိုက်တယ် ။ အစိမ်း အပြာ ပန်းနု မိုးပြာရောင် ဝမ်းစပ်လေးကို မျက်စိအအေးဆုံး ရွေးဝယ်ခဲ့တာပေါ့။ သူနဲ့လိုက်မဲ့ နူတ်ခမ်းနီ ပန်းဖျော့ဖျော့လေးရယ် မိတ်ကပ်ဗူးတစုံရယ် ရေမွေး ခေါင်းလိမ်ဆီ အသုံးဆောင် နည်းနည်းပါးပါးနဲ့ တချို့တဝက် ဝယ်ခဲ့ပီးပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အပြင်က အသံလဲ မကြားရတော့ ထွက်ဖို့ကို အခက်ဖစ်နေတာ ရေချိုးခန်းထဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိ မျက်စိကစားကြည့်တော့ စင်လေးပေါ်မှာ တဘက်တထည်တွေ့တော့ ဝမ်းသားသွားတယ်။ တဘက်လေး ယူပက်ပစ်လိုက်ပြီး အပေါ်အဝတ်စားတေဝတ်ကာ ပြန်ထွက်လာတော့ ကိုကြီးမရှိတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။
စောင်တေ ဆွဲချပြီး အတွင်းခံနဲ့ စကတ်လေး ရှာဖွေရေး ဆင်းရပီလေ တွေ့ပါပြီ။ လုံးကျေလို့ ကောက်ကာဝတ်ပြီး အိပ်ယာလေး ကျကျနနသိမ်း ဧည့်ခန်းထဲထိုင်ပြီး ရောက်တက်ရာရာစဉ်းစားနေတုန်း တံခါးလေး ပွင့်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုတော်ချော အထုတ်တေ လေးထုတ် ငါးထုတ်နဲ့ ဝင်ချလာပါတော့တယ်။ အတင်းထပြီးပြေးဆွဲ ပေးရတာပေါ့လေ။ အထုတ်များ ခုံပေါ်တင်ပြီး ခေါင်းလေးငုံထားပြီး မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင် ကြိုးစားလွဲဖယ်နေရတဲ့အဖြစ်၊ အဲ့အချိန်မှာပဲ ……… မီးမီး ……… တုန်ခနဲ့ ဖစ်သွားခဲ့ရတယ်။ ရှင် ကိုစိုး …… …… ကိုကြီး မီးကိုလပ်ထပ်ရင် မီးခွင့်ပြုနိူင်မလား …… ကျမပျော်ရမလား ဝမ်းနည်းရမလား စဉ်းစားလို့ မတက်တော့ပြီ။
မီး ကိုကြီးမေးတာကို ဖြေလေ.. လက်မခံနိူင်ဘူးဆိုလဲ ကိုကြီး ဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးရင် ရနိူင်မလဲ… ကိုကြီးလဲ မစဉ်းစားတက်တော့ဘူး.. မီးလက်ခံနိူင်မယ်ဆိုရင် ကိုတို့တရားရုံးသွားပြီး လက်မှတ်ထိုးမယ်…ပြီးရင် မင်္ဂလာဆောင်မယ်… မီးအဖြေကို သိချင်တယ်.. ကြည်ဖြူစွာနဲ့ပဲ မျှော်လင့်ပါတယ် ……… …… ဟုတ် ကိုကြီး မီး လက်ခံပါတယ်.. ဒါမဲ့ မီးဒီပုံစံနဲ့သွားလို့ အဆင်ပြေနိူင်မလား ကိုကြီး …… ပြုံးရောင်သမ်းသွားတဲ့ ထောင့်ချိုးညီညီ နူတ်ခမ်းလေးကြောင့် ရင်ခုန်ရပြန်တယ။ …… အဲ့အတွက်မပူပါနဲ့ ကိုကြည့်ဝယ်လာခဲ့တယ်.. အခန်းထဲ ဝတ်ကြည့်ပေါ့……… အထုတ်လေးတေကောက်ဆွဲပြီး အခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့တယ်တယ်။ ကျနော်လဲ အနောက်ခန်းထဲဝင် ရေမိုးချိုးပြီး အပြင်ထွက်လာတော့ ညကသေချာ မသိရပေမဲ့ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် မီးမီး တော်တော်ကျေနပ်နေမိတယ်။
ဂျင် ကစားတဲ့သူတေလို့ ဖုထွက်မနေပဲ ချပ်ရပ်တဲ့ ဗိုက်သားကျယ်ပြန့်တဲ့ရင်အုံ၂ခုကြား အမွေးစပ်စပ်နဲ့ ခါးစောင်းကနေ ဆီးခုံဆင်းသွားတဲ့နေရာက အမြှောင်းလိုက် အကြည့်လွဲခဲ့ရတယ်။ အရမ်းလှတယ် မီးရယ်.…… ပန်းနုရောင် ဝမ်းစပ်လေးကိုရွေးထားတယ်။ မိတ်ကပ်ပါးပါးလေးဖို့ပြီး နူတ်ခမ်းကို ပန်းဆီရောင်လေး ဆိုးထားတယ်။ ကျနော် ပြေးနမ်းချင်စိတ်တေ တဖွားဖွားပေါက်သွားပေမဲ့ ကိုယ်ဟန်ဖို့ ထိန်းထားရတယ်။ မီး ရှက်နေမှာ စိုးလို့။ …… မီးမီး အရမ်းလှတယ်နော်… ခုလိုကြီး ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကိုယ်အနူးညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်.. မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး မှားခဲ့တဲ့အတွက် အပြည့်အ၀ ကိုယ်တာဝန်ယူပါတယယ်.. ကဲကဲ လုပ်စရာရှိတာလေးလုပ်ပြီး သွားကြမယ်… ဟိုမှာ ရှေ့နေကို စောင့်ခိုင်းထားတာ နော် …… ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ အဝတ်စားတေ ကြည့်ကောင်းမဲ့ တစုံဝတ်ပြီး ကားလေးနဲ့ နှစ်ယောက်တူ ချိန်းဆိုထားတဲ့ တရားရုံးသို့ တက်လှမ်းလာခဲ့တော့သည်။
ဟိုရောက်တော့ ရှေ့နေနဲ့ စကားပြောဆိုပြီး လုပ်ဆောင်စရာများလုပ် ရှေ့နေကို အသိသက်သေထားပြီး ကျနော်တို့၂ယောက် တရားဝင် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုက်ကြတယ်။ ဒါမဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်ကလွဲလို့ ဒီအကြောင်းတေကို ဘယ်သူမှ ပေးမသိထားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မီးရဲ့ သိက္ခာနဲ့ အလုပ်ကိစ္စတေကြောင့် ခုလိုစီစဉ်ခဲ့ရတာပါ နောင်အခါခွင့်သင့်မှ မင်္ဂလာဆောင်ကြဖို့ နှစ်ယောက်သား တိုင်ပင်ခဲ့ကြရတယ်။ မီးကလဲ နားလည်တယ်။ လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ ကားလေးနဲ့ မြို့လိုက်ပတ်ပေါ့။ ဝယ်စရာလေးတေဝယ် ကြည်နူးရတယ်။
အရမ်းလဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ခုလိုပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ လိုက်လည်ရတော့ အရမ်းပျော်စရာပေါ့။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာတော့ အခန်းပြန်ရောက်ရင်ကိုပဲ စဉ်းစားရင်ခုန်နေမိတာ အမှန်ပဲ။ မီးရဲ့ ဘဝမှာ အပျော်ဆုံးနေ့တနေ့ဆိုရင်တော့ မမှားပါဘူး အရမ်းပျော်တယ်။ တရားဝင် လက်ထပ်ပြီးပြီဆိုတော့ လင်မယားတေ ဖြစ်သွားကြပြီပေါ့။ ဒါဆို အခန်းပြန်ရောက်တာနဲ့ ကိုကြီးက မီးကို… အို ရင်ခုန်လိုက်တာ။ ဒီလိုနဲ့ ၄နာရီလောက်အချိန်ဖြုန်းပြီး စားစရာသောက်စရာတေ ဝယ်ကာ အခန်းပြန်လာခဲ့တော့တယ်။ …… မီးရေ ကိုကြီးတို့ အပြင်မှာထမင်းလဲ စားခဲ့ပြီဆိုတော့ အခန်းမှာပဲနားကြမယ်ကွာနော် …… ဟုတ်ကိုကြီး …… မီး.. ကိုကြီးရေချိုးဦးမယ် မီးရော ချိုးမလား …… ဟုတ် ချိုးမယ်လေ ကိုကြီးပြီးရင် မီးချိုးမယ် ခါးလေးညွတ်ပြီး မီးရဲ့နဖူးလေးကို ကိုကြီး နမ်းသွားတယ်။
တကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ သွေးကျောတေ ဖျင်းကနဲ ကြက်သီးမွေးလေးတွေပါ ထောင်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ကိုကြီးရေဝင်ချိုးတယ်။ ပြီးတော့ မီးချိုးတယ်။ ပြီးတော့ ပြီးတော့..…… မီး လာလေ ကိုကြီးနားကို……… ဟုတ် …… ခေါင်းလေးငုံပြီး ကိုကြီးဘေး ဝင်အိပ်လိုက်တယ်။ ကုန်တိုက်ကဝင်ဝယ်လာတဲ့ ဂါဝန်ပါးပါးလေးက အသားမှာ ကပ်နေသယောင်၊ မျက်လုံးကစားကြည့်တော့ ဘောင်းဘီတိုလေးကို အတွင်းခံဝတ်မထားဘူး၊ အထဲကနေ ခုံးကြွနေတာ။
အို ညက ဒီလီးကြီးနဲ့အလိုးခံခဲ့ရတာပါလား… ရင်တေခုန်လိုက်တာ .. အခုလဲမီးကို လိုးတော့မလို့လား မသိဘူး တွေးရင်းနဲ့ကို ပေါင်ကြားက အစိလေးမာတင်းပြီး အရည်လေးတေစိမ့်နေပြီ ကိုကြီးက နဖူးကဆံပင်လေးတေကို သပ်တင်ပြီး နဖူးလေးကိုစနမ်းတယ်။ ပြီးတော့ ပါး နူတ်ခမ်း၊ မီးလဲ ပြန်နမ်းပြန်စုပ်တာပေါ့။ ပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့ ကိုကြီးလျှာကို ပြန်စုပ်၊ မီးလဲပြန်ထိုးထည့်နဲ့ တော်တော်ခရီးရောက်နေပြီ။ ကိုကြီး နမ်းနေတာကို ရပ်ပြီး လည်ပင်းနဲ့ လည်ပင်းစောင်းတေကို နမ်းလိုက်ယက်လိုက် လုပ်ပေးနေတယ်။ မီး ထိန်းထားပေမဲ့ မရတော့ဘူး။ ……… အင်း ဟင်း ဟင့် ကို ကြီး အာ့ အား ဟင့် ကိုကြီးရေ ………… ကောင်းလား မီး ………… အင်း အရမ်းကောင်းတယ် အား နမ်းနေတာ ယက်နေတာ အသားကဖြူတော့ အနီကွပ်လေးတေပါဖစ်တယ်။
မီး………ရှင် ဟင့် ကိုကြီး……… အဝတ်စားတေချွတ်လိုက်မယ်နော်……… ဟုတ် ကိုကြီးအဝတ်စားတေချွတ်ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်း ပန်းရောင်လေးတေကို ဆွပြီး ကလေးလေးလို စို့ပေးနေတယ်။ ……… အား အား ကောင်းတယ် ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ်… ကိုကြီးလဲ အဝတ်စားတေချွတ်ကွာ ………… စို့နေရာက ရပ်ပြီးတော့ အဝတ်စားတေ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ………… ဝိုးးး နည်းတဲ့လီးကြီးလား…………… ပြွတ်ခနဲ ညှစ်ချလိုက်မိတဲ့စောက်ရည်တေ အိပ်ယာခင်းမှာ မြေခခဲ့ရတယ်။ ကိုကြီးက ဗိုက်သားတေကို ဆက်ယက်ပေးနေတယ်။
မီးလေ လောကကြီး အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ အသက်ရွူသံတေလဲမြန်မြန်လာတယ်။ စောက်ရည်တေလဲ ရွဲနေပြီ။ တဆင့်ပီးတဆင့် ယက်လာတာ ဆီးခုံလေးကိုနမ်းပြီး စောက်ဖုတ်ကို ယက်နေပါပြီ။ မီး မထိန်းနိူင်တော့ဘူး။ ကိုကြီး က ဆရာကျတယ်။ လက်ခလယ်လေး ထိုးထည့်ပြီး အစိကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ကလော်ပေးနေပြီး လက်က ဂျီစပေါ့ ကို ကုတ်ပေးနေတယ်။ ……… အား ကိုကြီး မီးကိုသတ်နေတာလား… အားကောင်းတယ် ကိုကြီး… အား အင်း အင့် အိုး အား .. ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်… အား ကိုကြီး မီးပီးတော့မယ်… အားကိုကြီး ဖယ် ဖယ် … အား ကိုကြီး အ အ အ အား စောက်ရည်တေ ရွဲပစ်ပြီး ကိုကြီး မျက်နှာတေရွဲကုန်တာ။
ကိုကြီး မီးပြီးသွားပြီ ……… အင်း ကောင်းလား မီး ကိုလုပ်ပေးတာ ……… ဟုတ် အရမ်းကောင်းတယ် ကိုကြီး စောက်ရည်တေ တံတွေးတေပေကျန်နေတဲ့ စောက်ပက်ကို မဆေးပဲ သူ့လီးကြီးကို အရင်းကနေ ကိုင်ပြီး တရစ်ချင်းဆီ စသွင်းပါတော့တယ်။ တော်သေးတယ် အရည်တေ ရှိနေလို့သာပေါ့။ ………… အ အား အား ကိုကြီး ကောင်းလိုက်တာ ………… လီးကြီးကို အဝင်ချောအောင် ပေါင်၂ချောင်းကို ကားနိူင်သလောက် ကားထားပေးတယ်။ စောက်ခေါင်းထဲကို လီးဝင်လာတော့မှ လိုအပ်ချက်တေ ပြည့်စုံသွားသလို ခံစားရတယ်။ ……… မီး ကိုကြီး လိုးမယ်နော် ……… ဟုတ် ကိုကြီး လိုးပါနော် ဒိစောက်ပက်က ကိုကြီးအတွက် သီးသန့်ပါနော်။
လိုးပါ က်ုကြီးရယ် မီး အရမ်းကောင်းနေပြီ… အား အား အား ………… ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း..ဖလောက် ဖလောက် ဖလောက် ဘွတ် ဘွတ် ……… အား အား အား အား ကောင်းလိုက်တာ ……… ……… ကြိုက်လား ငါလိုးတာ ပြော ……… ဟုတ်ကောင်းပါတယ် လိုးပါ လိုးပါ ……… ……… မပူနဲ့ လိုးပေးမယ် တနေ့လုံး ………… ……… အင့် အင့် အင့် အင့် အား အား အား အား အား ကိုကြီး လိုးပါအရမ်းကောင်းတယ် ””” ကိုကြီး ဒစ်က ကားတယ် ကားတော့ အထုတ်အသွင်းတိုင်းမှာ ဂျီစပေါ့ ကို ချိတ်ချိတ်ဆွဲတော့ မီး မခံနိူင် ပုံစံနောက်တမျိုး မပြောင်းခင်မှာပဲ မီးနောက်တချီပြီး ခဲ့ရတယ်။
ခံလို့က ကောင်းနေဆဲ။ ဖောင်း ဖောင်းးးဖောင်း ဖောင်းးးးးဖောင်းးးးးး ……… အားအား အားးးးအားးးးးအားးး လိုးပါ လိုးပါ ကြမ်းးကြမ်းလိုးပါ ”’ ဖောင်းဖောင်း ဖောင်းးးးးဖောင်းးးးဖောင်းး. အချက် ၅၀ လောက် ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးပြီး လီးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ မီးရင်ထဲက ကလီစာတေ ဆွဲထုတ်လိုက်သလို ဟာတာတာကျန်ခဲ့တယ်။ ……… မီးရေ လေးဘက်ထောက်ပေးနော် ……… ဟုတ် ကိုကြီး ……… ပြောပြီး နေရာပြင်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ခါးလေး နည်းနည်းခွက်ဖင်လေးကော့ထားခိုင်းတယ်။
မီး ရဲ့ ကားထားတဲ့ ပေါင်၂ချောင်းကြားက စောက်ပက်ကြီးက ပြူးပြီးတော့ စောက်ရည်တေနဲ့ဝင်းလက်နေတာ။ ………… မီး ကိုလိုးတော့မယ်နော် ………… ဟုတ် ကို .. အား ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ် ””’ ကိုကြီးက ခါးကိုကိုင်ပြီး ဆွဲဆောင့်လိုးတာ အောင့်ပေမဲ့ အရမ်းခံလို့ကောင်းတာ။ဖောင်းဖောင်း ဖောင်းးးးးဖောင်းးးဖောင်းးး လိုးတာ မနားဘူး။ ဖြန်း ဖြန်း ဘယ်ရော ညာရော ၂ဖက် အရိုက်ခံလိုက်ရတော့ နာတာရော စိတ်ပါထလာတယ်။
ရိုက်ပါ ကိုကြီး မီး အရမ်းကောင်းတယ် အား အား အား ကောင်းလိုက်တာ ရှင်.. လိုးလိုးကြမ်းကြမ်းလေး ……… ခါးကကိုင်ထားတဲ့ လက်ကို ဖြုတ်ပြီး မီးရဲ့ ဆံပင်ကို အရင်းကနေစုကိုင်ပြီး ဆံပင်ဆွဲလိုးပါလေရော။ ……… အား ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ် လိုးပါ လိုးပါ ကြမ်းကြမ်းလေး ………… အနေအေးသလောက် အရမ်းထန်တဲ့ မီး လိုးခံဖို့ တောင်းဆိုနေတာ ကလေးမုန့်ပူသလို တဆာဆာ။ ……… ကောင်းလား ”””’ ဖြန်းဖြန်း ……… အား အား ”””’ ဆံပင်လဲ ဆွဲအလိုးခံရ၊ ဖင်လဲ ချခံရ ကောင်းလိုက်တာ။ ……… မီးရေ ကိုကြီး အသားကုန်လိုးတော့မယ်နော် ””” ……… ဟုတ်ကိုကြီး ရတယ် လိုးလိုး ””” ဆံပင်ကို တဖက် ပခုံးကိုတဖက်ဆွဲပီး အသားကုန်လိုးဆောင့်ပစ်တာ။
ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ”’… အားးး အားးး ကို လိုးးပါ အား ””’ ဖောင်းဖောင်းးးး ……… အား ကောင်းတယ် လိုးလိုး ””” ဖောင်း ဖောင်းးးးဖောင်းး ………… အားအား ပြီး ပြီး မီး ပြီးပြီ ကို အား အား ””’ တရစပ် အချက် ၅၀လောက် လိုးပစ်ပြီးတော့ စောက်ပက်ထဲကို ကိုကြီး လီးရည် အပြည့် ထည့်ပေးခဲ့တယ်။ ……… အား အား အား အားးးးး ………… လီးကိုမထုတ်သေးပဲ မီးစောက်ပက်ထဲ စိမ်ထားပြီး မီး အပေါ်မှောက်အိပ်နေလိုက်တယ်။ 5မိနစ်လောက် နေပြီးတော့ လီးက ပလောက်ဆို မီးစောက်ပက်က ကျွတ်ထွက်သွားတယ်။ ……… ပြတ် ””” လီးရည်တေစီးကျလာတာ နှမျောစရာ။
၂ယောက်သား ဖတ်အိပ် လိုက်ကျတယ်။ တရေးနိုးတော့ တခါထလိုး ရေချိုး ထမင်းစားကြပြီး ညကြတော့ လိုး သတိရတခါလိုးပေါ့။ ……… မီး အစွဲကြီးစွဲသွားမိပြီ ကိုကြီး အရမ်းချစ်တယ် ””” နောက်ပိုင်းတော့ သူ့အခန်းသူနေ မီးလဲ အဆောင်ပြန်နေပေါ့။ လွမ်းတိုင်း တလ ၅ခါလောက်တော့ Hotel ခေါ်လိုးခံရတာပဲ။ ရုံးမှာကြတော့ မလွပ်လပ်လို့လေ။ ဟိုကိုင် ဒီကိုင်၊ အစပျိုးပြီးရင် Hotel ခေါ်လိုးနဲ့ မီးစောက်ပက်လဲ အသားပိုလေးတေတောင် ထွက်လို့နေပါပီရှင် ……… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဆုံခဲ့ရတဲ့တနေ့